သတင်း - မိမိကိုယ်ကိုနှင့်အခြားသူများကိုမည်သို့ကာကွယ်ရမည်
၁။ COVID-19 သည်လူတစ် ဦး မှတစ် ဦး သို့အလွယ်တကူပျံ့နှံ့နိုင်သည်။
၂။ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်အဆက်အသွယ်ရှိသော (၆ ပေအတွင်း) လူများကြားတွင်။
၃။ ရောဂါကူးစက်ခံရသူတစ် ဦး သည်ချောင်းဆိုးခြင်း၊ နှာချေခြင်း၊ အသက်ရှူခြင်း၊
၄။ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအစက်များကသူတို့ကိုနှာခေါင်းအမြှေးပါးများပေါ်သို့ရှူရှိုက်မိသောအခါ (သို့) နှာခေါင်းနှင့်ပါးစပ်အတွင်းပိုင်းကိုမျောပါစေသောရောဂါများကိုကူးစက်စေသည်။
ဒီနည်းနဲ့ COVID-19 ပြန့်နှံ့နိုင်သည်
၁။ အချို့သောအခြေအနေများတွင် (ဥပမာအားဖြင့်လူတို့သည်လေ ၀ င်လေထွက်ညံ့ဖျင်းသောနေရာများရှိသည့်အခါ) COVID-19 ကိုတစ်ခါတစ်ရံတွင်လေကြောင်းဖြင့်ပို့လွှတ်ခြင်းဖြင့်ပျံ့နှံ့နိုင်သည်။
2. COVID-19 သည်ညစ်ညမ်းသောမျက်နှာပြင်များနှင့်ထိတွေ့ခြင်းမှအများအားဖြင့်ပျံ့နှံ့သည်။
1. လက်များကိုမကြာခဏဆပ်ပြာနှင့်ရေဖြင့်အနည်းဆုံး ၂၀ စက္ကန့်ကြာအောင်အထူးသဖြင့်အများပြည်သူသွားရာနေရာသို့မဟုတ်နှာခေါင်းပေါက်ခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်းသို့မဟုတ်နှာချေခြင်းပြီးလျှင်။
3. အစာစားခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းမပြုမီ
တစ် ဦး နှီးပြောင်းလဲပြီးနောက် 9.
10. ဖျားနာသူတစ် ဦး အားပြုစုစောင့်ရှောက်ပြီးနောက်
၁၂။ ဆပ်ပြာနှင့်ရေကိုအလွယ်တကူမရရှိပါကအနည်းဆုံးအရက် ၆၀% ပါသည့်လက်သန့်ရှင်းဆေးကိုသုံးပါ။ သင်၏လက်များမျက်နှာပြင်များအားလုံးဖုံးအုပ်။ ခြောက်သွေ့သည့်အထိအတူတကွပွတ်သပ်ပါ။
၁၃။ သင်၏မျက်လုံးများ၊ နှာခေါင်းနှင့်ပါးစပ်များကိုလက်မဆေးဖြင့်လက်မထိရ။
၁။ သင်၏အိမ်တွင်း၌ - ဖျားနာနေသူများနှင့်နီးကပ်စွာအဆက်အသွယ်မလုပ်ပါနှင့်။
၂။ ဖြစ်နိုင်လျှင်ဖျားနာသူနှင့်အခြားအိမ်ထောင်စုဝင်များအကြား ၆ ပေခန့်ထားပါ။
၃။ သင်၏အိမ်အပြင်ဘက်တွင် - သင်နှင့်သင်၏မိသားစုတွင်မနေထိုင်သောသူများအကြား ၆ ပေအကွာအဝေးကိုထားပါ။
၅။ အခြားသူများထံမှအနည်းဆုံး ၆ ပေ (၂ လက်ဆန့်ခန့်) ဝေးပါ။
2. COVID-19 ကိုသင်ဖျားနာခြင်းမခံစားရရင်တောင်အခြားသူများထံကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
(၃) လူတိုင်းသည်အများပြည်သူဆိုင်ရာအခြေအနေများနှင့်သင့်အိမ်ထောင်စုတွင်မနေထိုင်သောသူများ၊ အထူးသဖြင့်အခြားလူမှုရေးအရဝေးကွာသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုထိန်းသိမ်းရန်ခက်ခဲသောအခါ၌လူများမျက်နှာဖုံးများဝတ်ဆင်သင့်သည်။
အသက် ၂ နှစ်အောက်ကလေးငယ်များ၊ အသက်ရှူကျပ်ခြင်း၊ သတိလစ်ခြင်း၊ မသန်စွမ်းခြင်းသို့မဟုတ်အခြားအကူအညီများမပါဘဲမျက်နှာဖုံးကိုမဖယ်ရှားနိုင်သောမည်သူမဆိုတွင်မျက်နှာဖုံးများကိုမထားသင့်ပါ။
5. ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်သားအတွက်ရည်ရွယ်သည့်မျက်နှာဖုံးကိုမသုံးပါနှင့်။ လက်ရှိတွင်ခွဲစိတ်ကုသသည့်မျက်နှာဖုံးများနှင့် N95 အသက်ရှူကိရိယာများသည်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်သားများနှင့်အခြားပထမ ဦး ဆုံးတုံ့ပြန်သူများအတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်ထားသင့်သောအရေးကြီးပစ္စည်းများဖြစ်သည်။
၆။ သင်နှင့်အခြားသူများအကြား ၆ ပေခန့်ဆက်ရှိနေရန်။ မျက်နှာဖုံးသည်လူမှုရေးဝေးကွာခြင်းအတွက်အစားထိုးမဟုတ်ပါ။
၁။ သင်၏တံတောင်ဆစ်၏အတွင်းပိုင်းကိုချောင်းဆိုးခြင်းသို့မဟုတ်နှာချေခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုသောအခါသင်၏ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းကိုတစ်သျှူးဖြင့်အမြဲဖုံးထားပါ။ တံတွေးထွေးခြင်းမပြုပါနှင့်။
သင်၏လက်ကိုဆပ်ပြာနှင့်ရေဖြင့်အနည်းဆုံးစက္ကန့် ၂၀ လောက်ချက်ချင်းဆေးပါ။ ဆပ်ပြာနှင့်ရေကိုအလွယ်တကူမရရှိပါကအနည်းဆုံးအရက် ၆၀% ပါသည့်လက်သန့်ရှင်းဆေးဖြင့်သင်၏လက်ကိုဆေးကြောပါ။
၁။ မကြာခဏထိတွေ့နေသောမျက်နှာပြင်များကိုနေ့စဉ်သန့်ရှင်းပြီးပိုးသတ်ဆေးပါ။ ၎င်းတွင်စားပွဲများ၊ တံခါးပေါက်ခလုတ်များ၊ မီးခလုတ်များ၊ ကောင်တာများ၊ လက်ကိုင်များ၊ စားပွဲခုံများ၊ ဖုန်းများ၊ ကီးဘုတ်များ၊ အိမ်သာများ၊
၂။ မျက်နှာပြင်များညစ်ပတ်နေပါကသန့်ရှင်းပါ။ ပိုးမွှားမှီမီဆပ်ပြာသို့မဟုတ်ဆပ်ပြာနှင့်ရေကိုသုံးပါ။
3. ထို့နောက်အိမ်ထောင်စုပိုးသတ်ဆေးကိုသုံးပါ။ အသုံးအများဆုံး EPA မှတ်ပုံတင်ထားသောအိမ်ထောင်စုပိုးသတ်ဆေးပြင်ပပုံသင်္ကေတသည်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။
၁။ ရောဂါလက္ခဏာများအတွက်သတိထားပါ။ အဖျားတက်ခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ အသက်ရှူကျပ်ခြင်း (သို့) COVID-19 ၏အခြားလက္ခဏာများကိုစောင့်ကြည့်ပါ။
2. အကယ်၍ သင်ဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာများအလုပ်လုပ်နေလျှင်၊ ရုံးခန်းသို့မဟုတ်အလုပ်ခွင်သို့သွားရန်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကွာအဝေးကို ၆ ပေအထိထားရန်ခက်ခဲသောအခြေအနေများတွင်အထူးသဖြင့်အရေးကြီးသည်။
လေ့ကျင့်ပြီးနောက်မိနစ် ၃၀ အတွင်း၌သင်၏အပူချိန်ကိုမယူပါနှင့်သို့မဟုတ်သင့်အပူချိန်ကိုလျှော့ချနိုင်သည့် acetaminophen ကဲ့သို့ဆေးများသောက်ပါ။
5. ရောဂါလက္ခဏာများပေါ်လာပါက CDC လမ်းညွှန်ကိုလိုက်နာပါ။
တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်များနှင့် COVID-19 ဖြစ်စေသောဗိုင်းရပ်စ်သည်ယခုဆောင်း ဦး ရာသီနှင့်ဆောင်းရာသီတွင်ပျံ့နှံ့သွားနိုင်သည်။ တုပ်ကွေးရောဂါရှိသူများနှင့် COVID-19 လူနာများကိုကုသရန်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်များကိုကျော်လွှားနိုင်လိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ကာလအတွင်းတုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးထိုးရန်ယခင်ကထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်။ တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးကိုရရှိခြင်းသည် COVID-19 ကိုကာကွယ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
၁။ တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးဟာတုပ်ကွေးရောဂါ၊ ဆေးရုံတင်ကုသမှုနှင့်သေဆုံးနိုင်ခြေများကိုလျှော့ချနိုင်ကြောင်းပြသထားတယ်။
2. တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းသည် COVID-19 ရှိလူနာများအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအရင်းအမြစ်များကိုလည်းကယ်တင်နိုင်သည်။